पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा किन गरियो खेलवाड ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा किन गरियो खेलवाड ?
प्रकाशित मिति: २८ माघ २०७२, बिहीबार
माघ २८ । काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको राजकीय सम्मानका साथ बुधबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरमा भतिजाद्वय अतुल र सुधांशुले दागबत्ती दिए । मंगलबार उनको निधन भएको थियो ।
-कोइरालाको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि मंगलबार बिहान ८:५० बजेसम्म महाराजगन्जस्थित निवासमा, १० बजेदेखि पार्टी कार्यालय सानेपा र २:३० बजेदेखि दशरथ रंगशालामा राखिएको थियो । बुधबार २:२० मा राजकीय सम्मानका साथ शवयात्रा गरी ४ बजे पशुपति आर्यघाटमा पुर्‍याइएको थियो ।
-कोइरालाको अन्त्येष्टिमा नेपाली सेनाको टुकडीले राष्ट्रिय धुनसहित १३ तोपको सलामीको दियो । सााझ ५ बजे उनको पार्थिव शरीरमा अतुल र सुधांशुले दागबत्ती दिए ।
-अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख ओनसरी घर्तीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, कूटनीतिक -नियोगका प्रतिनिधि, प्रशासक, सुरक्षाप्रमुखसहितका अधिकारी, कांग्रेसका सबै शीर्ष नेता पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए । -अन्त्येष्टिमा कार्यकर्ताले उनको जयकार समेत गरेका थिए ।
-शवयात्रामा हजारौँ शुभेच्छुक तथा कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थिए । अन्त्येष्टि ८ बजे सकिएको थियो ।
sushil sub yatra
माघसँग कोइरालाको संयोग
सुशील कोइराला २१ माघ १९९४ मा जन्मिएका थिए ।
२०१२ माघमा वीरगन्ज महाधिवेशनमा उनी पहिलोपटक सहभागी भएका थिए ।
२७ माघ ०७० मा कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।
२६ माघमा निधन भयो भने कोइरालाको २७ माघमै अन्त्येष्टि गरियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचारबारे उठेका गम्भीर सवाल
-पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कोइरालालाई सुविधास्वरूप गाडीसहित सुरक्षाकर्मीको सरकारी टोली खटिएको थियो । उनका निजी चिकित्सक डा. करवीरनाथ योगी थिए । तर, उनको अन्तिम अवस्था आउादासमेत कोही पनि सहयोगी साबित भएनन् ।
-उनको निवासमा अक्सिजन दिने मेसिन थियो । महाराजगन्जस्थित निवासबाट त्रिवि शिक्षण अस्पताल तीन किमि दूरीमा र त्योभन्दा नजिक गंगालाल अस्पतालसमेत थियो । तर, उनलाई अस्पताल लगिएन ।
-भिआइपी बिरामीलाई अप्ठ्यारो भए–नभएको बुझ्ने र अस्पताल पुर्‍याऊ भन्ने निर्देशन डाक्टरले दिनुपर्ने हो । कोइरालाका सुरक्षार्थ खटिएका डिएसपी महेन्द्र मरासिनीले भने, ‘उहाँलाई रोगले च्यापेको छ भनेर डक्टर सँगै रहेकाले हामीलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर, डाक्टरले केही भन्नुभएन ।’
-कोइरालाका निजी चिकित्सक डा. योगीका अनुसार पछिल्लो डेढ घन्टामा अरू वेलाभन्दा उनलाई असहज भएको थियो । तर, त्यो अवस्थामा करिब तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउन किन सकिएन ? कोइरालाको गाडी वा ट्याक्सीमै भए पनि उनलाई लैजान सकिन्थ्यो, तर कुनै विकल्प किन प्रयोग गरिएन ?
-निजी डाक्टर करवीर योगीका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा कोइरालाको अनुहार निमोनियाका कारण फुलेको थियो । भेट्न आउनेले ‘अनुहार फुलेछ सुशील’दा, चेकअप गराउन पर्‍यो’ भन्ने सुझाब दिने गरेका थिए । तर, उनी भन्थे, ‘चिसो छ, सामान्य निमोनिया पनि देखिएको छ, त्यसैले होला । साह्रो केही छैन ।’ सर्वसाधारणले असाधारण देख्ने
अनुहारलाई डाक्टरले कसरी साधारण माने ?
-कोइरालाको निधनपछि उनको सचिवालयका सदस्यले आफन्तलाई तत्काल खबर गर्न सकेनन् । परिवारका सदस्य तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई जानकारी दिन उनका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियालाई अतुलले पौने दुई बजे फोन गरेका थिए । त्यसअघि कोइरालाको अवस्थाबारे कसैलाई जानकारी थिएन । शेखरको निर्देशनमै उनका स्वकीय सचिव थपलियाले ७५ वटै जिल्लाका सभापति र केन्द्रीय नेतालाई जानकारी गराएका थिए।
-कोइरालाको निधनको खबरसँग सार्वजनिक भएको फोटोमा निधारमा चन्दनको बाक्लो लेप देखिएको थियो । तर, त्यसआसपासको छाला रातो थियो भने उनलाई ओढाइएको सिरकमा रगतको दाग थियो । यो विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । उनी सोमबार चक्कर आएर बाथरुममै लडेकोले चोट लागेको बताइएको छ । तर आधिकारिक जबाफ दिन कोही अघि सरेको छैन ।
-रगत कसरी देखियो त सिरकमा ? डक्टरहरू भन्छन्,‘मानिसको मृत्यु भएपछि शरीरको एक भागबाट रगत बाहिर देखिन्छ । रगत देखिँदा कि मुखबाट, कि मलद्वारबाट, कि तालु फुटेर देखिन्छ । कोइरालाको मुखबाट बाहिर आएको थियो होला ।’ तर, यकिनका साथ भन्ने आधिकारिक व्यक्ति कोही भेटिएको छैन । जबकि उनी पूर्वप्रधानमन्त्री र सबैन्दा ठूलो दलका नेता हुन् ।
विद्युतीय दहन गर्न परिवारका सदस्यले मानेनन्
-कोइरालाको निधनपछि मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले परिवारको स्वीकृति भएमा उनको अन्त्येष्टि आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाहगृहमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उनको परिवारका सदस्यले मानेनन् । भाइ अशोकले काठकै चितामा हिन्दू परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने बताएपछि त्यहीअनुसार कोइरालाको अन्त्येष्टि गरियो ।
किरिया महाराजगंजस्थित निवासमै
-कोइराला बस्दै आएको भतिजा शशांकको महाराजगन्जस्थित घरमा नै हिन्दू परम्पराअनुसार बुधबारबाट भतिजाद्वय अतुल र सुधांशु किरिया बसेका छन् । दागबत्ती दिएका दुई भतिजा नै किरियामा बसेको मृदुला कोइरालाले बताइन् ।
शवयात्रामा हजारौँ शुभेच्छुक
-अपराह्न २:२० मा रंगशालाबाट सुरु भएको शवयात्रामा हजारौँ कांग्रेस कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा सर्वसाधारण सहभागी थिए । शवयात्रा सुरु गर्दा नेपाली सेनाको विशेष टुकडीले राष्ट्रिय धुन बजाएको थियो । पशुपति आर्यघाटमा अपराह्न चार बजे शवयात्रा पुगेको थियो ।
-शवयात्रामा सहभागीले ‘सुशील’दाको पालामा, संविधान नेपालमा’, ‘संविधानका पिता सुशील’दा, सुशील’दा अमर रहुन्’ लगायतका नारा लगाएका थिए । शवयात्रा थापाथली, रामशाहपथ, पुतलीसडक, कमलपोखरी, रातोपुल, गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो ।
-शवयात्रामा सडकको दायाँबायाँ उभिएका सर्वसाधारणले कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । फूलको माला, पुष्पगुच्छा चढाएर उनीहरूले कोइरालाप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए । सडकका दुवै किनारामा सर्वसाधारणको भीड थियो । घरका छतबाट समेत पुष्पगुच्छाले उनको सम्मान गरेका थिए ।
को–को पुगे आर्यघाट
कोइरालालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, भुटानका गृहमन्त्री दावा गेल्छेन, भारतीय राजदूत रन्जित रायसहित नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू आर्यघाट पुगेका थिए ।
गच्छदारले कोइरालाको खुट्टा ढोगे
उपप्रधानमन्त्री एवं फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा दिउासो ४:४४ मा आर्यघाटमा कोइरालाको खुट्टा ढोगे । गच्छदार कांग्रेसबाट बाहिरिएर क्षेत्रीय दल फोरममा लागेका छन् ।
राउटे पनि श्रद्धाञ्जली दिन आए
कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिन राउटेहरू पनि दशरथ रंगशाला पुगेका थिए । दिउासो १२:३५ मा रंगशाला पुगेका उनीहरूले शवको परिक्रमा गरेर श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । राउटेका मुखिया सूर्यनारायण शाहीले भने, ‘हामीलाई चार लाख दिनुभएको थियो । तर, उहाँ बित्नुभएछ दु:ख लागेको छ ।’
श्रद्धाञ्जलीका दिन बुधबार पनि भीड
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको मंगलबार निधन भयो । उनको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार अपराह्नदेखि रंगशालामा राखिएको थियो । अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार रंगशालामा भीड थियो । रंगशालामा बुधबार बिहान ९ बजे पुन: श्रद्धाञ्जलीका लागि खुला गरिएपछि शुभेच्छुक, दलका नेता, कूटनीतिज्ञलगायतको भीड लागेको थियो । शवयात्रा सुरु हुने वेलासम्म शुभेच्छुकहरू दशरथ रंगशालामा खचाखच थिए । यसक्रममा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्बेको श्रद्धाञ्जली सन्देशसहित आएका गृहमन्त्री दावा गेल्छेन रंगशाला पुगेका थिए । गेच्छेनले कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तोब्बेको सन्देश दिएका थिए ।
अधिवेशनको चर्चा जारी
पार्टी सभापतिको निधनपछि श्रद्धाञ्जलीका लागि रंगशाला पुगेका नेताहरूबीच पार्टीको महाधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनबारे चर्चा भएको थियो । शीर्ष नेताहरूले कुन जिल्लामा के भयो भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जिल्ला अधिवेशन सकिएका र स्थगित भएका ठाउँमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे झुन्डझुन्डमा नेताहरूले छलफल गरिरहेका थिए।
विदेशीका सम्झनामा सुशील कोइराला
राष्ट्रसंघका महासचिव मुनले सम्झिए कोइरालालाई
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुनले कांग्रेस सभापति कोइरालाको निधनबाट आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् । उनका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कोइरालाले जटिल संक्रमणकालमा संवैधानिक प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको’ उल्लेख छ । सहमतिको प्रक्रियामा सबै पार्टी र जनतालाई कोइरालाले एकीकृत गरेको उल्लेख गर्दै मुनले कोइरालाले नेपालको लोकतान्त्रीकरण र शान्तिप्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताएका छन् ।
बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको समवेदनापत्र
बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको लिखित समवेदना सन्देशमा कोइरालाको निधनले नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै राजनीतिक क्षति पुगेको उल्लेख गरेकी छिन् । बंगलादेशको ‘मुक्तियुद्ध’मा कोइरालाले पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै हसिनाले कोइरालालाई बंगलादेशका मित्रभन्दा बंगलादेशले नै गर्व महसुस गर्ने बताएकी छिन् ।
भुटान र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौंमा
बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री एएच मोहम्मद अली काठमाडौं आएर स्वर्गीय कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । उनी एक घन्टा काठमाडौं बसेर स्वदेश फर्किएका छन् । बंगलादेशी मन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भेट गरेका थिए । यसैगरी भुटानका गृह तथा संस्कृतिमन्त्री दावा ग्याल्छेनले पनि काठमाडौं आएर कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
भुटान पिपुल्स पार्टी स्तब्ध
भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोइरालाको निधनले समस्त भुटानी जनताका साथै भुटान पिपल्स पार्टी परिवार स्तब्ध एवं मर्माहत भएको बताएका छन् । ‘स्वर्गीय कोइरालाज्यूको असामयिक निधनबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले असल, सरल, सादगी जीवनशैलीका निष्ठावान, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा तल्लीन एक होनहार नेता गुमाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँको निधनबाट विश्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका सच्चा प्रवर्तक, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति अविचलित निष्ठा राख्ने, सुदृढ चारित्रिक, उच्च नैतिकवान, निष्कलंकित, समन्वयकारी एवं धैर्यवान नेताको सदैव अभाव खट्किनेछ ।’
भारतीय समाजवादी दु:खी
भारतको समाजवादी समागमका नेता तथा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका पूर्वउपाध्यक्ष डा. सुनिलमले पनि विज्ञप्ति जारी गरी कोइरालाको निधनमा आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् । उनले समाजवादी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कोइरालाले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै भारतीय समाजवादीहरूका पनि कोइराला असल मित्र रहेको शोक वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, भारतको राष्ट्रवादी कांग्रेसका नेता तथा सांसद डिपी त्रिपाठीले पनि काठमाडौं आएर कोइरालाको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । नयाँ पत्रिका